Isaziso sezomthetho nemibandela yokusetshenziswa 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Isaziso sezomthetho nemibandela yokusetshenziswa
Idokhumenti ibuyekezwe ku-15 / 05 / 2020
• I-CIF / NIF 75164656B
• Ihhovisi elibhalisiwe lise-C / Tórtola n-7 18014 (eGranada)
Nikeza okuqukethwe okuhlobene nomsebenzi wokumaketha okuku-inthanethi.
Lapho usebenzisa iwebhusayithi ye-emulator.online, Umsebenzisi uyavuma ukungakwenzi noma ikuphi ukuziphatha okungalimaza isithombe, izintshisekelo namalungelo we-emulator.online noma abantu besithathu noma okungalimaza, kukhubaze noma kugcwalise ngokweqile iwebhusayithi ye-emulator. online noma lokho kungavimbela, nganoma iyiphi indlela, ukusetshenziswa okuvamile kwewebhu.
i-emulator.online ithatha izinyathelo zokuphepha ezanele ukuthola ukuthi kukhona yini amagciwane. Kodwa-ke, Umsebenzisi kufanele azi ukuthi izindlela zokuphepha zezinhlelo zamakhompiyutha ku-Intanethi azithembeki ngokuphelele nokuthi, ngakho-ke, i-emulator.online ayinakuqinisekisa ukungabikho kwamagciwane noma ezinye izinto ezingadala ushintsho ezinhlelweni zamakhompyutha. (isoftware nehadiwe) yoMsebenzisi noma kumadokhumenti abo kagesi namafayela akuwo.
Gcina, shicilela futhi / noma udlulise idatha, imibhalo, izithombe, amafayela, izixhumanisi, isoftware noma okunye okuqukethwe okungabazisayo ngokuya ngemibandela yezomthetho esebenzayo, noma lokho ngokuya ngesilinganiso se-emulator. , amanyala, ukucwasana ngokobuhlanga, ukucwaswa kwabokufika noma okunye okuphikisayo noma okungekho emthethweni noma okungadala ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo, ikakhulukazi izithombe zocansi.
Njengomsebenzisi, waziswa ukuthi ukufinyelela kule webhusayithi akusho, nganoma iyiphi indlela, ukuqala kobudlelwano bezohwebo noJorge Bardales ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, izinsizakalo zayo nokuqukethwe ngaphandle kokwephula umthetho okwamanje, ukuthembeka okuhle nokuhleleka komphakathi. Ukusetshenziswa kwewebhusayithi ngezinjongo ezingekho emthethweni noma eziyingozi, noma lokho, nganoma iyiphi indlela, kungadala ukulimala noma kuvimbele ukusebenza okujwayelekile kwewebhusayithi akuvunyelwe.
Ukuphinda kwenziwe, kusatshalaliswe noma kuguqulwe, kuphelele noma kuyingxenye, ngaphandle kokuthi kugunyazwe abanikazi bayo abasemthethweni
UJorge Bardales uqinisekisa ubumfihlo bemininingwane yomuntu ehlinzekwa ABASEBENZISI kanye nokwelashwa kwabo ngokuya ngomthetho wamanje wokuvikelwa kwemininingwane yomuntu, esethathe amazinga okuphepha adingeka ngokomthetho wokuvikelwa kwemininingwane yomuntu.
UJorge Bardales uthembisa ukusebenzisa idatha efakwe kufayela le- "WEB Users AND SUBSCRIBERS", ukuhlonipha ubumfihlo bayo nokuyisebenzisa ngokuhambisana nenhloso yayo, kanye nokuthobela isibopho sakhe sokubasindisa nokuguqula zonke izindlela Ukugwema ushintsho, ukulahleka, ukwelashwa noma ukufinyelela okungagunyaziwe, ngokuya ngemibandela yeRoyal Decree 1720/2007 yangoDisemba 21, evuma iMithethonqubo yokuthuthukiswa koMthetho we-Organic 15/1999 kaDisemba 13, Ukuvikelwa Kwemininingwane Yakho.
Umsebenzisi angasebenzisa, maqondana nedatha eqoqiwe, amalungelo aqashelwa ku-Organic Law 15/1999, wokufinyelela, ukulungiswa noma ukukhanselwa kwedatha nokuphikiswa. Ukuze usebenzise la malungelo, umsebenzisi kumele enze isicelo esibhaliwe futhi esisayiniwe angasithumela, kanye nefothokhophi ye-ID yabo noma idokhumende elilinganayo lobunikazi, ekhelini leposi likaJorge Bardales (okungukuthi, C / Tórtola n-7 18014 (Granada)) noma nge-imeyili, kunamathiselwe ikhophi ye-ID ku: info (at) emulador.online. Ngaphambi kwezinsuku eziyi-10, isicelo sizophendulwa ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwelungelo ocele ukulisebenzisa.
UJorge Bardales wazisa ukuthi kukhona amafomu wezikhalazo atholakala kubasebenzisi nakumakhasimende.
Umsebenzisi angenza izimangalo ngokucela ifomu lakhe lokufuna noma ngokuthumela i-imeyili ku-info (at) emulador.online ekhombisa igama nesibongo sakho, insizakalo noma umkhiqizo othengiwe futhi usho izizathu zesimangalo sakho.
Futhi ungaqondisa isimangalo sakho ngeposi leposi ku: Jorge Bardales, C / Tórtola n-7 18014 (eGranada) usebenzisa, uma ufisa, ifomu lesimangalo elilandelayo:
Ukuze unakwe ngu: Jorge Bardales
I-imeyili: info (at) emulator.online
Ngalezi zimo ezijwayelekile, awekho amalungelo obunikazi obuhlakani noma ezimboni anikezwa ngaphezu kwe-emulator ye-inthanethi oku-inthanethi okuyimpahla yengqondo kaJorge Bardales, ukukhiqizwa kabusha, uguquko, ukusatshalaliswa, ukuxhumana komphakathi, okwenza kutholakale emphakathini, isizinda sivinjelwe ngokusobala , ukusetshenziswa kabusha, ukudlulisa noma ukusetshenziswa kwanoma yiluphi uhlobo, nganoma iyiphi indlela noma inqubo, yanoma iyiphi yazo, ngaphandle kwalapho kuvunyelwe ngokomthetho noma kugunyazwa ngumnikazi wamalungelo ahambisanayo.
Uma kwenzeka umsebenzisi noma umuntu wesithathu abheka ukuthi kube nokwephulwa kwamalungelo abo asemthethweni okuvikela ubunikazi bokusungula ngenxa yokwethulwa kokuqukethwe okuthile kuwebhu, kufanele bazise uJorge Bardales ngesimo esishiwo esibonisa:
UJorge Bardales wenqaba noma yimuphi umthwalo maqondana nemininingwane etholakala ngaphandle kwale webhusayithi, ngoba umsebenzi wezixhumanisi ovele ukwazisa kuphela uMsebenzisi ngobukhona beminye imithombo yolwazi esihlokweni esithile. UJorge Bardales uxolelwe kuwo wonke umthwalo wokusebenza ngokufanelekile kwezixhumanisi ezinjalo, umphumela otholwe ngezixhumanisi ezishilo, ubuqiniso nokuba semthethweni kokuqukethwe noma imininingwane engatholwa, kanye nomonakalo uMsebenzisi angawuthola ngenxa yolwazi olutholakala kuwebhusayithi exhunyiwe.
UJorge Bardales akanikeli ngesiqinisekiso futhi akanacala, noma ngabe ikuphi, ngomonakalo wanoma yiluphi uhlobo olungadalwa ngu:
Ngokuvamile, ubudlelwano phakathi kwe-emulador.online kanye nabasebenzisi bezinsizakalo zayo ze-telematic, abakhona kule webhusayithi, bangaphansi kwemithetho neziphathimandla zaseSpain naseziNkantolo zaseGranada.
Uma kwenzeka noma yimuphi umsebenzisi anemibuzo mayelana nalesi saziso esisemthethweni noma noma yikuphi ukuphawula kuwebhusayithi ye-emulator.online, angaya ku-info (at) emulador.online.
i-emulator.online inelungelo lokuguqula, nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini, ukwethulwa nokulungiswa kwe-web emulator.online, njengalesi saziso somthetho.
Umsebenzisi uyavuma ukungakwenzi noma ikuphi ukuziphatha okungalimaza isithombe, izintshisekelo namalungelo we-emulator.online noma izinkampani zangaphandle noma okungalimaza, kukhubaze noma kugcwalise ngokweqile i-emulator ye-inthanethi noma lokho okungavimba, nganoma iyiphi indlela ukusetshenziswa okujwayelekile kwewebhu.